သင့်ရဲ့ Android ဖုန်းထဲမှာမထားသင့်တဲ့ Application ၃ မျိုး
စမတ်ဖုန်းထဲမှာ မလိုအပ်တဲ့ app တွေသွင်းထားခြင်းဟာ ဖုန်းရဲ့ storage မှာလည်းနေရာယူသလို ဖုန်းရဲ့ Performance နဲ့ Battery ကိုလည်းလျော့ကျစေပါတယ်။ အခုပြောပြမှာကတော့ သင့်ရဲ့ Android စမတ်ဖုန်းထဲမှာမထားသင့်တဲ့ Application ၃ မျိုးအကြောင်းပါ။
Clean Master app သို့မဟုတ် တခြား Cleaning app/RAM Booster app များ
Clean Master ကဲ့သို့သော စမတ်ဖုန်းရဲ့မလိုအပ်တဲ့ဖိုင်များကိုရှင်းလင်းပေးမယ် ၊ သုံးရတာနှေးနေတာကိုပေါ့ပါးအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ app တွေဟာ အမှန်တကယ်တော့ စမတ်ဖုန်းထဲမှာသွင်းထားစရာမလိုတဲ့ app တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ app တွေသွင်းထားလို့ဖုန်းကထူးထွေပြီး သုံးရတာပေါ့ပါးမသွားတဲ့အပြင် ဒီ app တွေကြောင့်ဖုန်းရဲ့ Battery အားကုန်စေသလို ဒီ app တွေကနေတဆင့် အွန်လိုင်းကြော်ငြာတွေတက်တက်လာလို့ စိတ်အနှောင့်ယှက်ဖြစ်ရ ၊ ကြော်ငြာတွေပေါ်ဖို့ ဖုန်း internet data သုံးရလို့ ဖုန်းမှာမလိုအပ်ဘဲ ဘေလ်ကုန်ရတာတွေပဲအဖတ်တင်မှာပါ။ ဘယ် cleaning app မှသွင်းစရာမလိုဘဲ ဖုန်းကိုအသုံးပြုရလေးလံစေမယ့်အရာတွေကိုရှင်းလင်းပေးမယ့် စနစ်က Android စမတ်ဖုန်းများမှာမူလကတည်းကပါဝင်ပြီးသားပါ။ ဖုန်းရဲ့ setting > storage ထဲက Cached data ကိုနှိပ်ပြီး Clear Cached Data ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်လည်း ဖုန်းမှာမလိုအပ်တဲ့ cache data တွေကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
Settings > Apps > Downloaded ထဲက app တစ်ခုချင်းစီထဲကိုဝင်ပြီးတော့လည်း Clear Cache နှိပ်ပေးခြင်းဖြင့်လည်း ရှင်းလင်းနိုင်ပါတယ်။
2. Battery Saver app များ
ဖုန်းရဲ့ဘက်ထရီအားစားနှုန်းကိုသက်သာအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ App တွေဟာလည်းအမှန်တကယ်အားဖြင့် ဖုန်းကိုဘက်ထရီအားပိုစားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း App တွေဟာများသောအားဖြင့် ဖုန်းထဲမှာ Run နေတဲ့ Battery အားပိုမိုသုံးစွဲတဲ့ app တွေကိုရပ်ပစ်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ Battery အားကိုပိုခံစေတယ်ဆိုပေမယ့် မဖြစ်မနေ run နေအောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ app တွေကိုဘယ်လိုမှပိတ်ပစ်လို့မရပါဘူး ။ Force Stop လုပ်လည်းသူ့ဘာသူပြန် run နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီဖြစ်စဉ်ကိုထပ်ခါထပ်ခါလုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင် Battery အားသုံးစွဲမှုကိုပိုမိုမြင့်တက်လာစေမှာသာရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Cleaning App တွေလိုပဲ ဒီ app တွေကနေတဆင့် အွန်လိုင်းကြော်ငြာတွေတက်တက်လာလို့ စိတ်အနှောင့်ယှက်ဖြစ်ရ ၊ ကြော်ငြာတွေပေါ်ဖို့ ဖုန်း internet data သုံးရလို့ ဖုန်းမှာမလိုအပ်ဘဲ ဘေလ်ကုန်ရတာတွေပဲအဖတ်တင်မှာပါ။ အခုနောက်ပိုင်းထွက် Android ဖုန်းတွေမှာတော့ Battery အားချွေတာတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ပြုလုပ်ပေးမယ့် function တွေကို Built-in အနေနဲ့ထည့်သွင်းပေးလာကြပါပြီ။ ဒီလိုဖုန်းတွေမှာဆို Battery Saver app တွေသွင်းထားဖို့ပိုလို့တောင်မလိုအပ်သေးတာဖြစ်ပါတယ်။
3. Facebook app နှင့် Messenger app များ
Facebook app ဟာ ဖုန်းရဲ့ ဘက်ထရီအားကိုအသုံးစွဲဆုံး app တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Facebook ရဲ့ messenger app ဟာလည်းအလားတူပါပဲ။
Facebook app ကိုဖွင့်မသုံးနေလည်း ဒီ app တွေက အမြဲ run နေတဲ့ Battery အားကတော့အချိန်တိုင်းသုံးစွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ app ၂ ခုကိုဖုန်းမှာသွင်းမထားရင် ဖုန်းရဲ့ Battery အားသုံးစွဲချိန်ဟာအရင်ထက်ပိုမိုအသုံးခံမှာပါ။ ဒါကြောင့် Facebook သုံးစွဲတဲ့အခါ Facebook app ကိုမသုံးဘဲ Webpage ကြည့်တဲ့ Internet Browser ဖြင့် Facebook Website ကိုအသုံးပြုကြည့်ရှုခြင်းက ဖုန်းရဲ့ဘက်ထရီအားကိုပိုမိုအသုံးခံစေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် Facebook app မှာသုံးရတာလောက် Feature မစုံလင်တဲ့အတွက် User တွေကတော့ ဒီအချက်ကိုနှစ်သက်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။
တခြားရော ဘယ်လို app တွေကို ဖုန်းထဲကနေဖယ်ရှားသင့်သေးသလဲ ?
ဖုန်းရဲ့ Setting> Battery ထဲကိုဝင်လိုက်ရင် ဖုန်းရဲ့ Battery ကိုအများဆုံးသုံးစွဲနေတဲ့ app တွေကိုအစဉ်လိုက်တွေ့မြင်ရမှာပါ။ Battery အားအများဆုံးသုံးစွဲနေတဲ့ app list မှာ ကိုယ်နေ့စဉ် အမြဲသုံးစွဲနေရတဲ့ app တွေကလွဲလို့အခြားအသုံးမလိုတဲ့ app တွေက ဘက်ထရီအားအသုံးဆုံးနေရာတွေမှာရှိနေရင် ယင်း app တွေကိုဖုန်းထဲကနေဖယ်ရှားသင့်ပါတယ်။
Posted by dawallay lay at 7:17:00 PM
i-Phone အတုအစစ် ဘယ်လိုခွဲမလဲ သိချင်သောသူများအတွက် ...
♪ Computer မှ ဖိုင်များကို စမတ်ဖုန်းကနေ ကြိုးမဲ့ ရ...
Adobe Photoshop - เทคนิคง่ายๆที่ช่างภาพต้องรู้ วิธ...
Vivo Y15 ကို Firmware တင်ရင်း Display error တက်သွာ...
iPhone Passcode ကို ပြန်လည် ရယူနည်း Friday, May 23...
SP Flash Tool 5.1 MTK ဖုန်းအများစုကို firmware တင်...
Android Root လောကမှာ ဘုရင်တစ်ဆူလို့ပြောလို့ရတဲ့ Ki...
ဖုန်း​ဘေမရှိတဲ့ Data SIM Card ကို အင်​တာနက်​ Fre...
Whistle Phone Finder (လေချွန်ရင် ဖုန်းအသံမည်လာတဲ့ ...
မည်သည့်ကွန်ပျူတာမဆို မြန်မာစာ နှင့် မြန်မာ Keybo...
Samsung ဖုန်း V.5.1.1 နှင့် အထက်ဖုန်းတွေကိုRoot မလ...
Android ဖုန်းအားလုံးအတွက် မြန်မာစာမှန်ပြီး Version...
Samsung Galaxy Note4SM-N910C Firmware (မြန်မာစာ ...
မြန်မာစာအုပ်ပေါင်း (၃၀၀၀) ကျော် မြန်မာစာအုပ်ပေါင်း...
Min Min Chit It နည်းပညာ: True Smart 3.5 ဖုန်း Unlo...
True Smart 3.5 ဖုန်း Unlo True Smart 3.5 ဖုန်း Unl...
သင့်ရဲ့ Android ဖုန်းထဲမှာမထားသင့်တဲ့ Application ...
iPhone_iPad ဆိုင်ရာ အိုင်ဖုန်းတွေကိုင်တော့မယ်ဆို ဒ...
Samsung ဖုန်းမော်ဒယ်အားလုံး Version နိမ့်ချင်လား ...
Huawei Font.apk မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.................... ...
Windows 8 နှင့် Window 10 မှာဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ .NET F...
ndent & Tab Making CV Form စာစီနည်း
สอนแฟลช Flash เบื้องต้น พื้นฐาน อย่างง่าย By Real ...
FACEBOOK မှာ သူငယ်ချင်းတွေ ကိုယ့်ကို TAG မရအောင် လ...